Intee bay la egtahay sirta uu bixiyay Edward Snowden? - BBC News Somali
Intee bay la egtahay sirta uu bixiyay Edward Snowden?
28 Oktoobar 2013
Tan iyo markii uu baxsaday ninka horay ula shaqeyn jiray sirdoonka Maraykanka ee Edward Snowden, waxaa soo baxayay warar ka caraysiiyay xulafada Maraykanka oo ku saabsan basaasidda Maraykanka. Hadaba intee bay la egtahay sirta uu bixiyaya Snowden?
Edward Snowden ayaa horay ugu shaqeyn jiray hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da isla markaasina bixiyay sir ku saabsan qaabka sirdoonka Maraykanka ay u xadaan una dhagaystaan telefoonnada dadka iyo xiriirka Internatka, Snwoden waxa uu haatan magangalyo ahaan ku joogaa dalka Ruush-ka waxaana maraykanka uu u haystaa inuu inuu qiyaanay,
BBC-da ayaa banaanka soo dhigtay qaabka Maraykanka uu wax u basaaso.
Wargayska The Guardian ayaa daabacay in sirdoonka Maraykanka ay dhagaysteen dad dhowr milyan gaaraya telefoonno ay leeyihiin, wargayska waxaa uu sheegay in shirikadaha telefoonnada ay ku wareejiyeen sirdoonka Maraykanka macluumaadka macaamiisha telefoonnada.
Dhacdadaasi waxa ku xigtay warar ay wadajir u qoreen wargeysyada Washigton Post iyo the Guardian oo sheegayo in sirdoonka maraykanka ay sidoo kale duubtaan boogagga dadweynaha ay ku wada xiriiraan ee Facebooga, google-ka, Microsoft iyo Yahoo isla markaasina ay aaladahani ku xirteen barnaamij ay kala socon karaan oo lagu magacaabo Prism.
Image caption Wargaysyada ayaa qoray sida sirdoonka Maraykanka u basaasay Shiinaha
Aaldan iyada ah ee lagala socon karo xiriirka Internetka dadka ku dhexmara ayaa la sheegayaa inay lagu sameeyey xitaa dalka Talyaaniga oo lagala socday taasoo lagu dhagaysanayay xiriirka uu ra’iisul wasaaraha Talyaaniga samaynayay.
Edword Snowden ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka wadamada uu dabagalay amama ka xaday macluumaadka ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Hong Kong, Goobaha uu sida gaarka ah u bartilmaameedsadayna waxaa ka mid ah jaamacadaha, Ganacsiga iyo dadweynaha sare. Snowden ayaa qeexay inay jabiyeen oo xadeen shabakado waawayn oo u sahlay isgarsiinta ay wadaagaan kumanaan computer ah.
29-kii bishii June sirdoonka maraykanka waxay u dhaceen oo basaaseen xafiisyada Midowga Yurub eek u yaala maraykanka iyo Yurub sida ay qortay jariirada Germany Der Spiegel.
Qoraallad la helay ayaa sheegay in la dhagaysanayay waxa ka dhex socday xafiisyada Midowga Yurub ee magaalada Brussels ee dalka Beljiam.
Dowladda Jarmalka ayaa shir ugu yeertay Safiirka Maraykanka ee dalkaas kaddib markii warbaahinta Jarmalka ay sheegtay in telefoonnada gacanta ee hoggaamiyaha Jarmalka Anjela Merkel.
Arrintan ayaa looga hadlay shir madaxeedka Midowga Yuru, iyagoo Maraykanka ka codsaday inuu faafaahin ka bixiyo arrintaas.
Madaxda Midowga Yurub waxay ka digeen in is aaminaadda udhexaysa waddanada xulafa ah uu dhaawac soo gaari karo.
Image caption Yurub waxaa ka dhacay dibedbaxyo looga soo horjeeda basaasidda Maraykanka
Ilaa 30 safaradood ayaa la sheegay inay basaasayeen sirdoonka Maraykanka.
Waddamada la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah Faransiiska, Talyaaniga, Greeg iyo waddamo aan Yurub ahayn sida Japan, Koonfur Koreya iyo Hindiya.
Safaarada Midowga Yurub ee New York iyo Washington ayaa la sheegay in la basaasay.
Qoraallada uu soo bandhigay Edward Snowden ayaa muujinayo in Maraykanka uu jebiayay sharciga sirriyada ee dadka Maraykana.
Waxaa si khalad ah loo dhagaysnayay telefoonnada dadka Maraykanka oo loogu shakinayay khalad aanay iyagu galin.